လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်တိုင်း၏အလုပ် ၁၂ ခု | Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, ဒီဇင်ဘာလ 6, 2015 တနင်္ဂနွေ, ဒီဇင်ဘာလ 6, 2015 Douglas Karr
တစ်နေ့လျှင်မိနစ်အနည်းငယ်? တစ်ပတ်နာရီနာရီလောက်? အနတ္တ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ပရိသတ်ကိုတိုးပွားစေ။ ရပ်ရွာတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အလားအလာကိုအပြည့်အဝသဘောပေါက်ရန်စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုလိုအပ်သည်။ ကြည့်ပါ ဦး လူမှုမီဒီယာစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း ငါတို့အရင်ကထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ အဲဒါကိုအားစိုက်ထုတ်ဖို့၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့်အချိန်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလိုအပ်သည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဒီအချက်အလက်တွေဟာထိရောက်တဲ့လူမှုမီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပါ။ အဓိကသတိပေးချက် - အဖွဲ့အစည်းတိုင်းသည်ကွဲပြားသည်။ ဒီဇိုင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်သည့်လုပ်ငန်းအသွားအလာသည်စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်အတွက်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်ပြောရလျှင်ဤနေရာတွင်ဖော်ပြသောအချိန်အတိုင်းအတာသည်လူမှုရေးလမ်းကြောင်းမှတနေ့လျှင် ၁၅ မိနစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်လူမှုရေးလမ်းကြောင်းမှတန်ဖိုးရရှိနိုင်သည်ဟူသောအယူအဆထက် ပို၍ လက်တွေ့ကျသည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားရသည်။ Mark Smiciklas, လမ်းဆုံအတိုင်ပင်ခံ
ဘလော့ဂ် - လူမှုမီဒီယာမှတစ်ဆင့်မျှဝေနိုင်သောအကြောင်းအရာများကိုထုတ်လုပ်ရန် ၇.၅ နာရီ။
အရေးပေါ် - ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန် ၅ နာရီကြာအချိန်မရွေးရေးသားခြင်း၊ သုတေသနပြုခြင်းနှင့်ဂုဏ်သတင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်း။
အပ်ဒိတ်များ - စာသား၊ ဓာတ်ပုံနှင့်မှတ်ချက်များကိုတင်ရန် ၄ နာရီ။
စေ့စပ်ထားခြင်း - အောက်ပါအချက်များကိုတုံ့ပြန်ရန်တစ်ပတ်လျှင် ၄ နာရီ၊ ဖော်ပြချက်များနှင့်မေးခွန်းများ။
သုတေသန - အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပအကြောင်းအရာများကို ၃ နာရီကြာရယူရန်။
နားထောင်နေသည် - ၂.၅ နာရီစောင့်ကြည့်သည့်အမှတ်တံဆိပ်သည် hashtags၊ keywords နှင့်ရှာဖွေမှုများကိုဖော်ပြသည်။
ရူပ - ၂.၅ နာရီဖတ်ရှုခြင်း၊ ဖတ်ခြင်း၊ စီစစ်ခြင်းနှင့်အကြောင်းအရာကိုမျှဝေခြင်း။
အဝန်း - ပရိသတ်နှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်ဝယ်ယူမှု ၂.၅ နာရီ။
စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး - ပြိုင်ပွဲများကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာလျှောက်လွှာများကိုစီမံခန့်ခွဲရန် ၂.၅ နာရီ။
မဟာဗျူဟာ - ၂.၅ နာရီနည်းဗျူဟာရေးဆွဲခြင်းနှင့်အကြံဥာဏ်ပေးခြင်း။
analytics - လူမှုမီဒီယာအစီရင်ခံခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ၂.၅ နာရီ။
စီမံကိန်း - သင်၏အယ်ဒီတာပြက္ခဒိန်ကိုအသစ်ပြောင်းရန်နှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုတစ်ပတ်လျှင် ၁ နာရီ။
ဤအလုပ် ၁၂ ခုကိုပျမ်းမျှနာရီများအဖြစ်ကုမ္ပဏီများကပြီးမြောက်ရန်အသုံးစရိတ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစေသောမာ့ခ်၏ထူးခြားသောအချက်အလက်များဖြစ်သည်။
Tags: ဘလော့ဂ်infographicလမ်းဆုံအတိုင်ပင်ခံMark Smiciklasဂုဏ်သတင်းစီမံခန့်ခွဲမှုလူမှုမီဒီယာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလူမှုမီဒီယာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးလူမှုမီဒီယာအသိုင်းအဝိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းလူမှုမီဒီယာ curationဆိုရှယ်မီဒီယာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလူမှုမီဒီယာနာရီလူမှုမီဒီယာ infographicဆိုရှယ်မီဒီယာနားထောင်ခြင်းလူမှုမီဒီယာစောင့်ကြည့်လူမှုမီဒီယာစီမံကိန်းဆိုရှယ်မီဒီယာသုတေသနလူမှုမီဒီယာအချိန်ဇယားဆိုရှယ်မီဒီယာနည်းဗျူဟာလူမှုမီဒီယာအလုပ်ရက်သတ္တပတ်
10:2015 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 12, 35 တွင်
Douglas၊ သင့်ပို့စ်တွင် infographic ကိုမျှဝေသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည် – များစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်။